Ergamtichi Wayyaanee Lammaan magarsaa maqaa misoomaatiin uummata magaalaa Naqamtee goolaa akka jiru Qeerron gabaase. « QEERROO
June 9, 2017 By Qeerroo in Oduu/News	1 Comment
Waxabajjii 9,2017/Ergamtoonni OPDO,f amanamoo ta’uun uummata oromoo nagaa dhorkaa turan ammas guutummaa golee oromiyaa keessa oliif gadi deemuun uummata oromootti gurra duuchuu isaanii itti fufanii jiru.
Haaluma kanaan murni bicuu gogaa hoolaa uffachuun uummata oromoo bukkeetti fudhatama argachuuf jecha sobaan hololuun beekamu maqaaf peresdaantii mootummaa naannoo oromiyaa kan ofiin jedhu lammaan magarsaa torban kana guutuu godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa oliif gadi adeemuun maqaa misooma sobaatiin uummatatti hololaan lafa dhiphisaa jiraachuu isaa qeerroon gabaasee jira.
Sirni wayyaaneef dhadhaabbata ta’uun uummata oromoo irratti bara bittaa garbummaa dheeressuuf kutatee ka’e lammaan magarsaa maqaa misoomaa fi kiraa sassaabdummaa akkasumas gaaffii uummata oromoo karaa nagaatiin deebisna jechuun guutummaa oromiyaa keessa deemuudhaan uummata oromoo irratti kijibaa jira.
Addattimmoo torban kana keessa murni OPDO,n durfamu lammaan magarsaa godina wallagga bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessa oliif gadi adeemuun maqaa misoomaa daa’effachuun uummata magaalaa Naqamtee afanffajjeessaa akka jirutu himame.Murni wayyaaneef bitame kun yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessa dhuunffachuun maqaa hoospitaala riifeeraala yuunversiitii wallaggaa ijaarree turre eebisna jedhuunis uummata goolaa jiraachuu isaatu addeeffame.
Kun kanumaan osoo jiruus ergamtichi wayyaanee lammaan magarsaa maqaa eegzibishinii nageenyaa akkasumas warshaa timaatimaa fi warshaa juusii cuunfu isiniif dhaabna jedhuun uummata magaalaa Naqamtee oliif gadi oofaa akka jirutu eerame.Misoomni ergamtoonni OPDO eebbisuuf gara leeqaatti imalan keessaa peerssentiin walakkaan akka hin hojjettamin garuu namoonni ijaan argan ragaa quubsaa kennaa jiran.
Hoospitaallii fi Istaadeemiin wayyaaneen eebbisna jettee uummata magaalaa Naqamtee ittiin goolaa jirtu walakkaan isaa hojjetamee kan hin xumuramnee fi qulqulliinaan kan hojjetamaa hin jirre ta’us maddeen qeerroo itti dabaluun gabaasee jira.
Waraanni sirna wayyaanees lammaan magarsaa magaalicha dhufuurraan kan ka’e guutummaaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee dhuunffachuun uummata bahaaf gala dhorkaa akka jiru maddeen qeerroo leeqaarraa gabaasan.Kana malees uummanni daanddii irra akka hin deemneef humni waraanaa goolaa akka jirutu addeeffame.
« Sagaleen Qeerroo Rakkoo Network Wayyaaneen Uumteen Guyyaa Muraasaaf Qilleensa Irraa Hafee Ture Amma Deebi’e.
SBO: Waxabajjii 11 bara 2017. Oduu, Gabaasa Oduu Warraaqsa FXG fi Dhimma Jijjiirraa Tartiiba Qubee Afaan Oromoo irratti Gaaffii fi Deebii Barsiisaa Namarraa Addaamuu waliin taasifame. »
Ergamtichi-Wayyaanee Lammaan magarsaa maqaa misoomaatiin uummata magaalaa Naqamtee goolaa akka jiru Qeerron gabaase